Waaxda Waxsoosaarka Kaymaha Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Warshadaha Furaha|Waxyaabaha Daaqa
Qeybaha Muhiimka ah
Mas'uuliyadda iyo joogtaynta warshadaha sii kordhaya
Ku dhowaad 200 sano, warshadaha kaynta ayaa door muhiim ah ka ciyaaray dhaqaalaha Washington. Maalmihii hore, kaymaha bikradaha ah ee daboolay gobolka ayaa gacan ka gaystay hurinta ballaadhinta Reer Galbeedka waxayna u beddeleen xerooyin yaryar oo xaaluf ah bulshooyin barwaaqaysan. Maanta, waaxda wax soo saarka keynta ayaa ah warshadda saddexaad ee waxsoosaarka waxsoosaarka ee Washington, iyadoo shaqo abuur iyo fursado u abuureysa shirkadaha iyo maalgashadayaasha.
Xilliga sii jiritaanka iyo wakiilnimada ay muhiim u yihiin wax soo saar, gobolka ayaa horseed u noqday dib-u-soo-nooleynta warshadaha. Laga soo bilaabo horumarinta barnaamijyada magdhow ee shaqaalaha hal-abuurka ah iyo shaqaalaha jarista bilowga qarnigii 20-aad ilaa abuuritaanka dhirtii ugu horreysay adduunka, iyadoo geedaha loola dhaqmo sidii dalagga beeraha halkii laga heli lahaa khayraad dabiici ah oo kooban.
In kasta oo caqabado badan oo soo food saaray sanadihii la soo dhaafay, awoodda warshaduhu u leeyihiin inay ikhtiraacaan, u casriyeeyaan una ballaadhiyaan ayaa waxay caddayn ku filan u tahay in laacibkan weyn ee waayihii dhaqaale ee Washington uu sii wadi doono inuu door muhiim ah ka ciyaaro mustaqbalkiisa.
Kala duwanaanta iyo koritaanka
Qaybaha wax soo saarka keynta ee Gobolka Washington waxay daboolayaan khadad ganacsi oo balaaran, laga bilaabo goynta dhaqameed iyo soosaarka alwaaxa ilaa Chips, balka, sagxadda dhulka, baalasha, alwaaxa, millayga, dahaarka dahaarka leh. Warshaduhu waxay sidoo kale kakooban yihiin saxarka iyo waraaqaha iyo waxsoosaarka qiimaha leh sida albaabada, looxyada daaqadaha iyo jaranjarooyinka, iyagoo siinaya shirkadaha fursado badan oo balaarin iyo koriinba leh.
Qiyaastii kala bar Washington waa keymo. Qaybta Galbeed ee gobolka, 75% geedaha waxay ka yaryihiin qarnigii badhkoodna qiyaastii kala bar waxay ka yar yihiin 40 sano, iyadoo loo tixgelinayo da'da goosashada ugu habboon. Sannadkii 2014, in ka badan 3.2 bilyan oo fuudh oo geedo ah ayaa laga soo goostay dhulal gaar loo leeyahay, federaalka iyo gobolka, inta badan Douglas-fir iyo galbeedka hemlock, taas oo ka dhigan 13% wadarta wax soo saarka alwaaxda Mareykanka ee jilicsan iyo 7% dhammaan wax soo saarka alwaaxda ee Mareykanka. . Dhulalka keynta gaarka loo leeyahay ee Washington ayaa leh saddex meelood laba meel goynta alwaaxa gobolka.
Iyadoo isha lagu hayo joogtaynta iyo ilaalinimada, ganacsiga 1,700+ ee wax soo saarka keymaha ee Washington waxay shaqaaleeyaan ilaa 42,000 oo shaqaale ah, iyagoo kasbanaya ku dhowaad 3 bilyan oo mushahar sanadkii ah. In ka badan 10% shaqooyinka la xiriira keymaha ayaa ah “cagaar” marka la barbardhigo 3% shaqaalaha gobolka guud ahaan. Dakhliga guud ee ganacsiga waa qiyaastii $ 28 bilyan sanadkii.
Mustaqbalka wax soo saarka kaynta
Horumarka istiraatiijiyadaha koritaanka iyo ku dhaqanka maamulka alwaaxa, wax soo saar kasta oo acre ah ayaa la saadaalinayaa inay sii wadi doonto fuulitaanka sanadaha soo socda, iyadoo la hubinayo in si joogto ah loo helo wax soo saarka keymaha ee warshadaha.
Horumarka dhismaha, sida alwaaxda laamiyada iskutallaabta ah (CLT), oo ay weheliso fahamka in qalabka alwaaxa laga sameeyo ay soo saaraan hawo yar iyo wasakheynta biyaha, soosaaraan qiiqa CO2 ee hoose una baahan tamar ka yar soosaarka alaabada kale, waxay sii wadi doontaa shidaalka kobaca warshadaha. mustaqbalka dhow.
Adeegsiga qadiimiga ah ee biomass ee lagu arko miinshaarka iyo waraaqaha wax lagu shiido ayaa leh saamayn isbadal ah maadaama geedi socodka la casriyeeyay loona habeeyay adeegsiga baaxad weyn ee bulshooyinka ku nool Washington oo dhan. Shirkado cusub iyo hal-abuurnimo cusub ayaa sii wadaya helitaanka adeegsiga geedka oo dhan, laga soo bilaabo alwaax milled ilaa biofuels.
Xaqiiqdii, Jaamacadda Washington iyo Washington State University waxay wadaan cilmi baaris ku saabsan sida wax soo saarka keymaha loogu adeegsan karo awoodda diyaaradaha dalka. Daraasaddan cilmibaadhista ah ayaa xiise ka heshay Waaxda Difaaca, Boeing iyo Alaska Airlines, kuwaas oo sameeyey duullimaadyo tijaabo ah iyaga oo adeegsanaya jiilkan cusub ee shidaalka duurka ku wada.
Shirkadaha Gobolka Washington, warshadaha wax soo saarka keynta waxay soo bandhigaan fursado cusub maadaama qarniyadii hore ay warshad dowladeed la kulantay caqabadaha mustaqbalka, kaliya maahan aagagga waara, mas'uuliyadda mas'uul ka ah dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa caamka ah, laakiin adeegsiga wax soo saarka kaynta ee cusub siyaabaha lagu daboolayo baahida sii kordheysa ee adduunka ee loogu talagalay wax soo saarka keymaha Gobolka Washington.
Waxaan nahay dad ka sarreeya kuwa kale!
Haddii aad qorsheyneyso inaad adduunka ku qaadato duufaan leh xarig alwaax cusub ah ama aad maalgashanayso alaabada soo socota ee CLT, Gobolka Washington waa xulashada ugu habboon.
Dhaqankeenna hal-abuurnimada, dhaxalka mas'uuliyadda mas'uulka ah ee lagu dheellitiray kobaca warshadaha, bay'adda ganacsiga u janjeedha - oo aan ku jirin canshuuro shaqsiyadeed ama shirkadeed - muuqaal qurxoon oo alwaaxdii hore ee koritaanka ahaa iyo kala duwanaanshaha kaladuwanaanta hodanka ah, waxay ku siinayaan fursado aad u fiican oo xagga koritaanka, ballaarinta iyo maalgashiga ah
Si aad wax badan uga ogaato waaxda wax soo saarka keymaha, naga soo wac lambarka (206) 256-6100. Waan ku farxi doonaa inaan ka jawaabno su'aalahaaga oo aan ka caawinno ganacsigaaga inuu guul ka gaaro Washington.
Istaraatiijiyadda Qeybta Waxsoosaarka Kaymaha ee 2017-19 (PDF)
Ururka Ilaalinta Kaymaha Washington
Kheyraadka Dabiiciga ah Badankood
Golaha Kheyraadka Kaymaha Mareykanka
La Taliyaha Waxsoosaarka Kaymaha & La Taliyaha Horumarinta Dhaqaalaha Reer Miyiga